mhando 0.7.5 – The chakarebesa zuva ++
Chikumi 22, 2011 kubudikidza chipo 23 Comments
Kutsigira 5 yakawanda Indic mitauro
Rimwe zuva pashure zhizha rava pamutemo atanga kuchamhembe hemisphere, tiri kudada kupa shanduro 0.7.5 pamusoro plugin yedu. Shanduro iyi rinowedzera rutsigiro mitauro mitsva kuti zvakaziviswa sezvo rinotsigirwa nhasi Google Translate – ChiBengali, ChiGujarati, ChiKannada, Tamil uye Telugu.
Asati anomhanyira kuwedzera avo mitauro kuti Blog renyu, ndapota kuyeuchidzwa kuti mitauro ungashandisa ajax Marshal kuti kushanda nemazvo, izvo zvinoreva kuti kusika mutoro pamusoro Server kwenyu pamusoro wokutanga kusangana itsva tambo (kumanikidza kuti tinochera shanduro kubva Google). Saka sarudzo ndeyako, asi makanzi nezvokudzokera…
Uyezve zvimwe Shanduro iyi rinowedzera kusarudza kwete kudarika ari default Nzvimbo pamwe default mutauro Transposh raMwari, maitiro ichi (chitsva 0.7.4) akabvumira MU vanoishandisa kuti arun mapeji mumutauro wavo, asi Ukuwo zvausingafariri vanoshandisa kuti aida kushandisa nzvimbo mune mumwe mutauro pane default yavo, saka zvino izvi configurable.
Takavawo hwakavandudzika rokushandura UI, chinotevera uye yapfuura mabhatani zvino kunze kuchinja kuitwa, uye nhaurirano haangazozikamwi kuzodzosera zvakatinakira pamusoro nekudzvanya mabhatani aya.
Ina Under: Release zviziviso Tagged With: 0.7, shandurudzo google, kuduku, mimwe mitauro, rusununguko, ui, Wordpress plugin
mhando 0.7.0 – Remangwana rokushandura inowanikwa!
Ndira 12, 2011 kubudikidza chipo 3 Comments
Rinotevera zvikuru Shanduro kusunungurwa Transposh ari pano, uye kuti vapemberere chiitiko hwatakatanga pfupi Video (pamusoro 11 maminitsi) . Kusuma zvimwe zvitsva rinowanika shanduro itsva. Muri kupfuura akachingamidza uchichenjerera vhidhiyo uye sarudza kuti rinotevera chikoro Award mubayiro rokushandura plugin update mafirimu.
Chokutanga uchaona muna kuvatsva shanduro ndiyo huru update kuti mushandisi inowanikwa, tawedzera vaviri zvikuru akumbira zvinhu kuti inowanikwa akadai anotevera / yapfuura mabhatani, kufarirwa shanduro zvoga uye kuwana mashoko kuti vashandure. Chimwe dzinonakidza chinhu kuti isu akawedzera ndiye anokwanisa kuti mushanduri kuona yepakutanga mutsara yakasiyana mutauro kana akanga atova rakashandurwa kuti mutauro akati manually, saka kuzvitutumadza une Blog muHebheru iro iwe rinoshandurwa kuti Chirungu, mushanduri anogona kushandura yako nzvimbo kubva Chirungu mumwe mutauro, izvo zvingava nyore kwaari. Ndinoda kukutendai Hanan nokuti pakutanga kukumbira aya. Zvinogonekawo ikozvino kubvisa shanduro kubva munhoroondo nhaurirano, ndiro danho yakananga achishandura yakasimba masimba pamusoro unhu rokushandura.
Inowanikwa zvakare sleeker, pamwe zvinofadza ui kuti kuri localizable uye themable, unogona kuisa dingindira iri Widget pazviruva, uye nzvimbo yakanaka kuwana makabatisisa sei Vachatarisana ndiko themeroller. Kana uchida kutibatsira kushandura inowanikwa kuti mutauro wako uye kuwana Credits nokuti, ndapota kutiudza nokushandisa kuonana isu nezvechisarudzo kumusoro.
Maoko nhangemutange ichiri mberi, uye Transposh ndiye plugin wokutanga (kuti tinoziva) kubatsira (rinonyatsotsigira, kushanda rutsigiro) nokuti 60 mitauro nokuwedzera Esperanto rutsigiro vachishandisa Apertium injini, nokuti zvino chete anoshandira Chirungu uye Spanish vanyora, asi uchawedzera mitauro yakawanda pamusoro kudiwa.
Vakawanda wakaiswa vanobatanidzwa, Database inogadziridza, refu vakatsvaka Meta kiyi rokushandura, uye zvakawanda – Kuvharwa ~ 15 matikiti redu trac.
Kugumisira asi kusiri kupedzisira – ari Credits vashanduri vari kusunungurwa ichi kuenda: Amir nokuti shanduro yake muchiHebheru Ignacio nokuti Spanish shanduro, kuvonga vakomana!
Ina Under: Release zviziviso Tagged With: 0.7, apertium kushandura, kuduku, mimwe mitauro, rusununguko, themeroller, ui, Video